ကုမ္ပဏီ သတင်း - Ningbo Zhenhai Yitong စက်ယန္တရား စက်ရုံ
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး နှင့် ကုန်ပစ္စည်း
တိကျစွာ CNC စက်ယန္တရား
စိတ်တိုင်းကျ CNC စက်ယန္တရား
CNC စက်ယန္တရား ဝန်ဆောင်မှုများ
စိတ်တိုင်းကျ စီနို ကြိတ်ခွဲ
The အောက်ပါ ဟုတ်တယ် အကြောင်း ကုမ္ပဏီ သတင်း ဆက်စပ်, ငါ မျှော်လင့်ပါတယ် ရန် ကူညီပါ မင်း ပိုကောင်း နားလည်သည် ကုမ္ပဏီ သတင်း.
သံမဏိ သံမဏိ 316 သော့ခလောက် အဆင်သင့် ရန် သင်္ဘော
ငါတို့ ထည့်သည် က အအေး - ဖွဲ့စည်း အရင်က CNC စက်ယန္တရား, တခါ အတိုင်းအတာ ဖြစ်ကြသည် ပြီးပြီ က တိကျ CNC laကs, ကြိုက်တယ် က ဝက်အူ, မီးဖွား, စသည်တို့ စက်ယန္တရား စင်တာ အလိုတော် ဖြစ်လိမ့်မည် က နောက်ဆုံး လုပ်ငန်းစဉ် ရန် လုပ် က ပတ်ပတ်လည် slot များ in သုံး နေရာများ မှာ တစ်ခု အချိန်။
ထုပ်ပိုး ၏ သေးငယ်သည် ထည့်သည် အဆင်သင့် ရန် သင်္ဘော
ဤရွေ့ကား သေးငယ်သည် ထည့် ဖြစ်ကြသည် hex ဝက်အူ ထည့်ပါ လုပ် ဘို့ မော်တော်ကား စက်မှုလုပ်ငန်း။ The ပစ္စည်း ဟုတ်တယ် 42CrMo, သော ရှိပါတယ် မြင့်သည် ခိုင်မာခြင်း, ဒါပေါ့ သော က အပိုင်း လုပ်နိုင် သည်းခံ က ဖိအား စဉ်အတွင်း က တပ်ဆင်။
တိကျစွာ မော်တော်ကား စက်ယန္တရား & ရထား အစိတ်အပိုင်း ကုန်ထုတ်လုပ်မှု
နောက်ထပ် အကြောင်း က စက်ယန္တရား အလုပ် in Yitong စက်ယန္တရား
The အောင်မြင်မှု ၏ Yitong မော်တော်ကား တိကျသော စက်ယန္တရား
The သံမဏိ သံမဏိ တိကျသော စက်ယန္တရား
လိပ်စာ: ဖန်ချန်, Xiepu မြို့, Zhenhai ခရိုင်, Ningbo မြို့, တရုတ်
ဖုန်းနံပါတ်: +86 15058065698
သံမဏိ သံမဏိ 316 သော့ခလောက် အဆင်သင့် ရန် သင်္ဘော2019/09/18
ထုပ်ပိုး ၏ သေးငယ်သည် ထည့်သည် အဆင်သင့် ရန် သင်္ဘော2019/09/18
သိကောင်းစရာများ ရန် သိမ်းဆည်းပါ ပိုက်ဆံ အပေါ် CNC စီမံကိန်း2019/09/18
အကယ်၍ youâ€™ပြန်လည် ကြည့်နေ ရန် ဖန်တီးသည် က proရန်type ဒါမှမဟုတ် ထုတ်ကုန် in က ကုန်ကျစရိတ် ကnd အချိန် ထိရောက်သော wကy, CNC mကchining ဟုတ်တယ် တစ်ခု greကt option ကို ရန် စဉ်းစားပါ။
အနာဂတ် ၏ CNC စက်များ2019/09/16
ဒါဟာ မေ သတိရစေ မင်း ၏ က ကြီးမားသည် နှင့် မော်လမြိုင် စက်တွေ ဘယ်တော့လဲ ငါတို့ စဉ်းစားပါ ၏ CNC စက်တွေ.
ဘယ်လိုလဲ ရန် ပိုကောင်း လုပ် သေချာတယ် က တည်ဆောက်သည် နှင့် ကရိယာ စဉ်တွင် စက်ယန္တရား?2019/08/01
The အနာဂတ် ၏ အလိုအလျောက် စက်ယန္တရား ဝန်ဆောင်မှုများ2019/08/01
ကြိတ်ခွဲ Chuck: အနန္တတန်ခိုးရှင် စွမ်းဆောင်ရည်2019/08/01
ဘယ်လိုလဲ အပိုဆောင်း ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်နိုင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သတ္တု အစိတ်အပိုင်းများ2019/08/01
တိကျစွာ မော်တော်ကား စက်ယန္တရား & ရထား အစိတ်အပိုင်း ကုန်ထုတ်လုပ်မှု2019/08/01
နောက်ထပ် အကြောင်း က စက်ယန္တရား အလုပ် in Yitong စက်ယန္တရား2019/08/01
The အောင်မြင်မှု ၏ Yitong မော်တော်ကား တိကျသော စက်ယန္တရား2019/08/01
The သံမဏိ သံမဏိ တိကျသော စက်ယန္တရား2019/08/01
The မော်တော်ကား လျှောက်လွှာ ၏ CNC စက်ယန္တရား2019/08/01
The ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၏ က CNC တိကျစွာ အလိုအလျောက် laက.2019/08/01
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၏ CMM တူရိယာ ရန် ပိုကောင်း အတိုင်းအတာ က ရှုပ်ထွေးသော တိကျသော စက်ယန္တရား အစိတ်အပိုင်းများ2019/08/01
6 Qustions ရန် ရွေးချယ်ပါ က mကchining ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း2019/08/01
The အရေးပါပုံ ၏ ဝန်ဆောင်မှု ရန် ရွေးချယ်ပါ က mကnufကcturer2019/08/01
မူပိုင်ခွင့် @ 2019 Ningbo Zhenhai Yitong စက်ယန္တရား စက်ရုံ အားလုံး အခွင့်အရေး ကြိုတင်ကာကွယ်ထားသည်